कसले देख्छ मुक्तिराजको पिडा ?
दुर्गाप्रसाद शर्मा, पर्वत । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका वडा नं. ७ पुरीटोलका का मुक्तिराज पुरीलाई आँपूmले गर्दै आएको कुखुरापालन व्यवसाय ‘तातो दूध निल्नु न ओकेल्नु’ जस्तै भएको छ । पछिल्लो ६
भ्रष्टले चुनाव लड्न पाउने कि नपाउने ? कांग्रेस पछि हट्दै
बीपी साह, काठमाडौं प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा भ्रष्ट भनेर यसअघि प्रमाणित व्यक्तिले पनि सजाय काटेपछि उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्थाको माग गरी दर्ता गराएको संशोधन विधेयकबाट कांग्रेसका सांसदहरू
क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदन आयोगलाई हस्तान्तरण
नेपाल समाचारपत्र काठमाडौं प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि आवश्यक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको छ। क्षेत्र निर्धारण आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट बिहीबार सरकारले आयोगलाई प्रतिवेदन उपलब्ध
सुनसहित तस्कर पक्राउ
काठमाडौं, (नेस) अवैध सुनसहित सुन ओसारपसारमा संलग्न ७ जनालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, महाराजगन्जको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा काठमाडौं टोखा नगरपालिका–११ सामाखुशी बस्ने सिन्धुपाल्चोक भोटेकोशी
पीडितमाथि भयानक ठट्टा, कहिलेसम्म दिने मान्छे मार्ने लाइसेन्स ?
प्रशान्त वली, काठमाडौं राजधानीको असन कमलाक्षीका गौतम ताम्राकार यही भदौ ७ गते आफ्नी पत्नीसहित बाइक चढेर पाटन अस्पतालतर्फ जाँदै थिए। पाटन अस्पतालमा आफन्तको उपचार भइरहेका कारण उनीहरू भेट्न अपराह्न
एकचालीस केन्द्रीय सदस्यद्वारा नेविसंघ बैठक बहिष्कार
काठमाडौँ, १५ भदौ । नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै ४१ केन्द्रीय सदस्यले आज बैठक बहिष्कार गरेका छन् । अपराह्न ४ बजे वाल्मिीकि क्याम्पसको
पहिलो चरणमा ३२ र दोस्रामा ४५ जिल्लामा निर्वाचन (सूची सहित)
काठमाडौँ, १५ भदौ । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनअन्तर्गत पहिलो चरणमा ३२ र दोस्रो चरणमा ४५ जिल्लामा गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । आयोगको आज बसेको बैठकले
१५ किलो सुन ओसारपसार कार्यमा संलग्न सात जना पक्राउ
काठमाडौँ, १५ भदौ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले अवैध १५ किलो सुन ओसारपसार कार्यमा संलग्न सात जनालाई पक्राउ गरेको छ । ब्यूरोबाट खटिएको टोलीले चीनको तिब्बतबाट रसुवाको
कक्षा १२ को व्यवस्थापन, मानविकी तथा शिक्षा संकायको परीक्षाफल सार्वजनिक
पुष्कर बुढाथोकी, भक्तपुर । गत बैशाखमा संचालन भएको कक्षा १२ को व्यवस्थापन, मानविकी तथा शिक्षा संकायको परीक्षाफल सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डका अनुसार १२ कक्षाको नियमित परीक्षामा ४८
लेखापढीको आन्दोलन, मालपोतको काम ठप्प
पुष्कर बुढाथोकी, भक्तपुर । मालपोत कार्यालयले मोठ र तामेली फाँटमा बिचौलियालाई प्रवेश निषेध गरेपछि नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एसोसिएसनले आन्दोलन सुरु गर्दा कार्यालयको काम ठप्प भएको छ । एसोसिएसनले विभिन्न
औपचारिक रुपमा दुई भएपछि भत्कीयो रुकुमको पहिचान
धनवीर दाहाल, रुकुम । साविकको पोखरा गाँउविकास समितीकी सुनिता खड्काले २०६८ सालमा लोकसेवाको परिक्षा दिँदा ५२ पोखरी ५३ टाकुरीको जिल्ला भनेर कुन जिल्लालाई चिनिन्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर आँखा चिम्लीएर
तेह्रथुममा बस दुर्घटना हुँदा ४ जना घाइते, एकको अवस्था गम्भिर
नेपाल समाचारपत्र, तेह्रथुम । तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका ९ काँडेमा बिहीबार दिउँसो बस दुर्घटना भएको छ । दुर्घटनामा परि चार जना भन्दा बढी यात्रु घाइते भएका छन् । तेह्रथुमको म्याङलुङबाट काठमाडौंका
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को व्यवस्थापन, मानविकी तथा शिक्षा संकायको नतिजा बिहिबार सार्वजनिक हुने जनाएको छ । स्रोतका अनुसार विज्ञान संकाय, प्राविधिक र संस्कृतको नतिजा
सिलवालको मुद्दामा आज बहस हुँदै, आउला त आदेश ?
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौ नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्ति विवादसम्बन्धी मुद्दामा बिहिबार पनि सर्वोच्च अदालतमा बहस हुँदैछ। साउन २६ गते नै मुद्दामा आदेश आउने अनुमान गरिए पनि बहस लम्बिएको थियो। सरकारी वकिलका
क्षेत्र निर्धारण आयोगले दियो प्रतिवेदन, कुन जिल्लामा कति निर्वाचन क्षेत्र ?
१ नम्बर प्रदेशमा २८, २ नम्बर प्रदेशमा ३२, ३ नम्बर प्रदेशमा ३३, ४ नम्बर प्रदेशमा २८, ५ नम्बर प्रदेशमा २६, ६ नम्बर प्रदेशमा १२ र ७ नम्बर प्रदेशमा १६ निर्वाचन
नेपालमा मात्रै भेटिए, गोर्खाली मुसा र मुसाकाने चमेरो
टीका बन्धन, काठमाडौं सरकारले बाघ, गैंडा, हात्ती, हिउँ चितुवाजस्ता ठूला वन्यजन्तुको संरक्षण र अनुसन्धानलाई मात्रै प्राथमिकता दिँदा अन्य मझइैला र साना स्तनधारी वन्यजन्तुको अवस्था र संख्या यकिन हुन सकेको
जग्गा गोलमालमा ५४ विरुद्ध मुद्दा, १० जना मालपोतका कर्मचारी पनि
सुरेश तामाङ, काठमाडौं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय चाबहिलका १० कर्मचारीसहित ५४ जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको गरेको छ। जग्गाधनी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले जग्गा
भारतीय सीमावर्ती बजारबाट खुलेआम प्रतिबन्धित कुखुरा तथा चल्ला भित्रिन थाले, निगरानी बढाईयो
भद्रपुर (ने.स) । झापासंग जोडिएको भारतीय सीमावर्ती बजारबाट खुलेआम नेपालमा प्रतिबन्धित कुखुरा तथा चल्ला भित्रिन थालेको छ । झापाको दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रबाट पशुपक्षि भित्रिन थालेको सूचना पाएपछि सशस्त्र प्रहरीले सो
ईलाका प्रशासन कर्यालय चन्द्रनिगाहपुरका कर्मचारीको दादागिरी, कार्यालयमै मनलाग्दी पारा
सञ्जय कार्की, रौतहट । रौतहटको ईलाका प्रशासन कर्यालय चन्द्रनिगाहपुरका कर्मचारी कार्यालय समयमै हराउने गरेपछि सेबाग्रही मर्कामा पर्ने गरेका छन । काम बिषेश टाढा बाट आएका सेबाग्रहीहरु सामान्य कामको लागि दिनभरी
सुकुम्बासी अशक्त जोडि सरकारी सहयोगको प्रतिक्षामा
चिरञ्जीवी मास्के, दोलखा । दोलखा बैतेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा बस्दै आएका ४० बर्षिया दृष्टिविहिन मिठु मिजार र बोल्न नसक्ने ४५ बर्षिया श्रीमती माया खड्का मिजार सुकुम्वासी छन् ।